औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामा उद्योगीको असन्तुष्टि : भने, नेपालमा उद्योग किन टिक्दैन ? | Ratopati
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामा उद्योगीको असन्तुष्टि : भने, नेपालमा उद्योग किन टिक्दैन ?
सरकार अहिले नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउने तयारीमा छ । ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी ल्याउन लागेको ऐन उद्योगमैत्री भएको सरकारले भनिरहँदा यता उद्योगीहरू भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले ल्याउने ऐन अहिलेसम्म उद्योगमैत्री नभएको उद्योगीहरूले आरोप लगाए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र ईपीआईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगीहरूले मस्यौदामा भएको कमजोरी सुधारका लागि सुझावसमेत दिए
कुनै लगानीकर्ताले आफ्नै स्रोतले जमिन किनेर लगानी गरेको छ भने जमिन बेच्न नपाइने, कित्ताकाट गर्न नपाइने भन्ने संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । त्यसलाई कन्जरभेटिभ नबनाऔँ । गलत नीतिलाई प्रत्यक्ष दियो भने लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । उद्योग बन्द भयो भने उसलाई बेचेर अर्को ठाउँमा जान दिनुपर्छ ।
कर्मचारी संचयकोषलाई लेखा समितिमा सांसदको प्रश्न : वाइडबडी विमानमा लगानी ठिक थियो ?